SEO & Marketing Content - Semalt Inogovana Kusiyana Unoda Kudzidza
Mune bhizimusi chero ripi zvaro rekuInternet, kudengesa kwema digital kunogona kuumba mwoyo wekukura kwekatevedzeri.Semuenzaniso, vatengesi vekutengesa vanoshandisa nzira dzinokosha dzakadai se Search Search Optimization (SEO) kana Content Marketing. Zvisinei,kuziva musiyano pakati pe SEO nehuwandu hwekutengesa zvingasava nyore - transport umzug hamburg. Iko kune kufanana kwakawanda pakati pemitemo miviriyekutsvaga vatengi paIndaneti. Kuti ive yakajeka, SEO inonyanya kukoshesa kudengesa. Panguva imwe chete, kugadzirwa kwehuwandu kunewo SEO.
Kuchengetedza kuvhiringidzika, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira we Semalt ,Lisa Mitchell, ane urongwa hwe nzira dzakasiyana dzekutsanangura ukama pakati pe SEO nehuwandu hwekutengesa.
Kusiyana pakati pe SEO nehuwandu hwekutengesa
SEO nehuwandu hwekutengesa hazviwanzobatanidzwa. Hazvina mhosva kuti izvi zvinoreveizvinhu zviviri zvinoratidzika sezvibatanidza pamwechete, zvimwe zvezvinhu zvazvo zvinobatana. Chimwe chinhu chikuru chevatengesi vanokanganisa vanoita kuti vatende kuti izvo zviripokushambadzira kunopedza kukosha kweSEO. Iyi pfungwa inogona kukanganisa munhu uye inoita kuti webhusaiti igare isina kunaka nekuda kwekusateverazvinhu zvinokosha zvakagadzirirwa mumwe nomumwe wavo.
Kukanganisa uku kunoonekwa nenzira iyo vanhu vanobatana nayo nezvimwe zvinhu zvakabatanidzwamune mumwe nomumwe wavo. Semuenzaniso, SEO inoreva nzira dzekutengeserana dzekudhijita dzakadai seyakakodzera mazwi ekutsvaga, zvisikwa zvekugadzira, zvekugarakubudiswa kwemashizha, kubatana uye kugadzira webhusaiti pane mamwe maitiro..Kune rumwe rutivi, kugadzirwa kwehupenyu kunosanganisira kusikwa kwezvinhu.Ndiyo imwe yenzira dzeGoogle dzekunyoresa webhusaiti, nekubatanidza zvinhu zvakadai sehuwandu hwehutano, urefu hweblog posts, virusi SMMpamwe nedzimwe nzvimbo dze SEO.
Seo SEO nehuwandu hwekutengeserana hunei
Kuona SEO uye kugadzirwa kwezvinhu zvakasiyana sezvikamu zvinogona kuumba zvakaipamafungiro edziviri. Chokutanga pane zvose, SEO chikamu chekutengesa kwehuwandu, kunyange zvisingaiti zvakakwana. Izvi zvinoratidzwa nekuda kwezvinhu zvakadai secontent placement, meta tags and meta description, social media linkage as well as keyword selection and development. Saka, vamwe veizvi zvinorondedzera, zvichiita kuti mbiri idzi dzive dzakanyanyobudirira zvekutengeserana kwema internet kwemakore gumi.
Muzvikamu zvose zve SEO kana kutengeswa kwehuwandu, kune nzira yechimwe chacho. Kuti iwe kuderedze kupesana, SEO uye kugadzirwa kwehupenyu kwakasiyana mune dzimwe nzira. Semuyenzaniso:
SEO inosangana nezviratidzo zvishoma kana zvichisvika pakusikwa kwezvinhu uye kugoverakupfuura kudengesa kwezvinhu. Inosanganisira zvakawanda zvehutano zvekushanda webhusaiti. Panguva imwe chete, kugadzirwa kwezvinhu zvinosanganisira kuwedzerazvinyorwa, izvo zvinoda SEO kuIndaneti kuonekwa.
Kushandisa SEO nehuwandu hwekutengesa zvakasiyana. Somuenzaniso, SEO zvinorevaautomating zvimwe zvehutano zvezvinhu zvekutengesa. Nzira chete yekugadzirwa kwekutengesa kunonzwisisika ndeyekushandiswa kweiyoSEO maitiro.
Kune ipi neipi yepaIndaneti inobatsira mukukunda kukwikwidza kwavo, zvose SEOuye kugadzirwa kwezvinhu zvakakodzera ndizvo zvinofanira kuva nazvo. Somuenzaniso, SEO ine zvakawanda zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvehutano izvo kugadzirwa kwehuwandu kunoda kushandaoptimally. Mune dzimwe nguva, SEO inobva pane ruzivo runowanikwa muhuwandu hwekutengesa. Kusarudza musiyano uye kuzivaiyo inogona kuva yakakosha kuti kubudirire paIndaneti. Somugumisiro, maitiro maviri ekutengeserana muIndaneti akazvimiririra uye anokwanisa kubatsira nzvimbowebsite yepamusoro mune zvinjini.